देशको १६ अ’र्वको हरेक वर्षको वि’जनेस इ’ण्डियालाई किन दिने ? व’हिष्कार गरौँ- स्वागत नेपाल – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
देशको १६ अ’र्वको हरेक वर्षको वि’जनेस इ’ण्डियालाई किन दिने ? व’हिष्कार गरौँ- स्वागत नेपाल
काठमाण्डौं । के मेरो देशका कलाकार/साहित्यकार सबै मरिसके ? हाम्रो देशको वार्षिक १६ अर्ब बराबरको विजनेस इण्डियनहरुलाई दिएर रुँदै हिँड्नु पर्ने, मेरा देशका कलाकार चाहिँ अ’मेरिका गएर आइसक्रिम बेच्नु पर्ने ????
मैले चाहिँ विगत धेरै वर्षदेखि नै इण्डि’यन फिल्मको प्रोमोसन गर्ने विदेशी एजेण्टको काम गर्ने नेपालकै एफएम अनि टेलिभिजहरु, इण्डियन च्यानलहरु र इण्डियन फिल्महरु पूरै ब\_हिष्कार गर्दै आएको छु ।
धेरै अघि पटक पट\_क यो बारेमा बोल्दै लेख्दै आएको पनि छु । यहाँ फेरि धेरै लामो बोल्न पनि जरुरी छैन । तर, इण्डियन एम्बेसीबाट पैसा लिएर इण्डियन गीत संगीत ए’फएमहरुमा बजाइरहने ! हाम्रा देशका भन्दा ति’नका पेट पालिदिने देशका कलाकारको समीक्षा गरिरहने !!
हाम्रा देशका सडक सडकमा हा’म्रै देशका कलाकारले हाम्रा लागि बेचिने चीजवस्तुको विज्ञापनमा तिनका देशका कलाकारको फोटा हेर्दै हिँड्नु पर्ने!!! मेरा देशमा कलाकारै छैनन् जस्ता्े !!!! हामीसँग क्यामेराम्यान, मोडेलहरु, गायक नै छ्र्रै’ननजस्तो !!!!!
उनीहरुको डविङ्ग गरिएको आ’वाजमा विज्ञापन सुन्नु/हेर्नु पर्ने साह्रै चित्त दुखेर आउँछ । देश भनेको कला संस्कृति पनि हो खाँबोको रुपमा; मेरो देशै छैन जस्तो मेरै देशका एफ एम/टिभी र पत्रप’त्रिकाहरुले बनाए ।
नेपाली बजारका लागि वि’देशीले ड’बिङ्ग गरेर तयार गर्ने विज्ञापन-बजार जो छ यसमा वार्षिक नेपालको १६ अर्ब रकमको कारोबार हुने गरेको छ । हामीले १० वर्षअघि यो बारेमा आवाज उठाउँदा ९ अर्वको कारोबार हुने गरेको थियो।
त्यसको फाइदा इ’ण्डियाले लिने गरेको छ । यसतर्फ पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि हामीले आवाज उठाउँदै आएका छाँै । लेखेरै संविधान सभा र ससदलाई पनि दिएका थियौँ ।
के मेरो देशका क’लाकार, गायक, संगीतकार, निर्देशक, मोडेल, एरेञ्जर, साहित्यकार सबै मरिसके र मैले तिनको कला मेरा सडक सडकमा मेरै देशका कला’कारले पनि हाम्रो देशको वार्षिक १६ अर्ब बराबरको विजनेस इण्डियनहरुलाई दिएर रुँदै हिँड्नु पर्ने, मेरा देशका कलाकार चाहिँ अमेरिका गएर आइसक्रिम बेच्नु पर्ने ?
अहिले फेरि इ’ण्डियन च्यानलहरु वहिष्कार गर्नु पर्ने कारण प्रष्ट भएको छ । कोरोनाको बारेमा फै’लाएको भ्रमका बारेमा नेपालमा भएको भए कानुनी कारवाही हुने थियो । नेपाल सरकारले इण्डियासँग तत्काल औ’पचारिक रुपमा पत्र काटेर प्रश्न गर्नु पर्छ ।
र, सर’कारी तहबाटै ब’हिष्कार गरिनुपर्छ । तत्काल सरकारले गरोस्, हामी जनताले गर्ने कारवाही भनेको घरघरबाट व्यक्ति व्यक्तिले बहिष्कार गर्ने नै हो ।
Previous आफू जस्तो नै’तिक र स’दाचारी मानिस अरु नभएको गोकुल बाँस्कोटाका दा’वी!!
Next तिमीलाई चाहिएको यहि थियो, देश लु’ट्ने वहाना । जुन वहाना ल’कडाउन वनेर आइदियो – विनोद त्रीपाठी